को हुन्, मेलम्चीको बाढीले ज्यान गुमाएका मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर कमल ? - Engineers Post
Nation Jobs Nea election
को हुन्, मेलम्चीको बाढीले ज्यान गुमाएका मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर कमल ?
इन्जिनियर्स पोस्ट June 18, 2021
बुधबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रुपमा कार्यरत कमल लोचन महतोको निधन भयो ।
भारतीय, चिनियाँ र नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको टोली बस्दै आएको क्याम्प बाढीले बगाउँदा ८ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक सम्पर्कबिहीन भएका थिए । उनीहरुमध्ये लोचनसहित अन्य दुई चिनियाँको शव खोलामा भेटिएको थियो । महतोको शव सुनकोशी गाउँपालिका ७ कालढुङ्ग्रेस्थित नदी किनारमा फेला परेको थियो ।
३२ वषीय लोचन भारतको झारखण्डको हल्दीपोखरी गाउँ निवासी हुन् । उनी मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । भारतमा उनको मृत्युको खबर सबैतिर फैलिएको छ र यतिबेला उनको परिवारका सदस्य शोकमा छन् ।
उनी भारतको प्रेसेजियन इन्फ्राटेक लिमिटेड (पीआइएल) मा बरिष्ठ इन्जिनियरको पदमा कार्यरत थिए । यो कम्पनी ठूला नदीमा बाँध बनाए विद्युत् उत्पादन कार्यमा क्रियाशील छ । कम्पनीले पछिल्लो समय नेपालमा महतोको नेतृत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको थियो ।
महतो अविवाहित थिए । उनको परिवारमा आमा र दुई दाइ–भाइ छन् । बुबा भने केही वर्ष पहिला वितेका थिए । महतो यसअघि ६ महिनापछि भारत गएर २० दिनको घर विदा मनाएर नेपाल फर्किएका थिए । उनी फोटोग्राफीको पनि सौखिन थिए ।
उनको मृत शरीरलाई शुक्रबार झारखण्ड लैजाने तयारी गरिएको छ । पीआइएलमार्फत उनको परिवारले आफूहरुले परिवारको एक सदस्य गुमाएको सूचना पाएका थिए ।
सुरुङमार्ग र पुलको डिजाइन गर्न इन्जिनियरसहितको चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपालमा
कर नतिर्ने करदाताको घर, पसल र व्यवसाय सिलबन्दी गरिने
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह, इन्जिनियरसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
पुनर्निर्माणमा खटिएका कामदारहरूको सीप परीक्षण गर्न सम्झौता
एक महिनामै एक चौथाइ विकास बजेट खर्च
घट्दै इन्जिनियरिङ विद्यार्थी, २०२१ भित्र ६३ वटा इन्जिनियरिङ कलेज बन्द हुँदै
इन्जिनियरिङतर्फ ५ जना बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय
सबइन्जिनियरसहित प्राविधिकका लागि जागिरको अवसर (विज्ञापनसहित)
राजा महेन्द्रको पालामा १ घण्टामा डिजाइन, सवा १ लाखमा तयार भएको चाकुपाटको गुड्ने घरको कथा
इन्जिनियरका लागि जागिरको अवसर
मेकानिकल इन्जिनियरिङका टपर विद्यार्थी–जसलाई रोजाइले नभई भाग्यले दैनिक ज्यालादारी बनाइदियो
पनौती नगरपालिकाले माग्यो ५ सब–इन्जिनियर (विज्ञापनसहित)
Main News Magazine Sector Engineering Nation Jobs